लेखकको खोजशब्द • सोच र गन्तव्य
सोच र नियति पुस्तक खोज्नुहोस्
चिन्ता र डस्टिन
सहायता बिना, यो शful्कास्पद छ कि काम लेखिएको हुने थियो, किनकि मलाई सोच्न र उही लेख्न यो गाह्रो थियो समय। मेरो शरीर अस्थिर हुनु पर्छ जब म सोचे विषय कुरा मा फारम र संरचनाको निर्माण गर्न उपयुक्त शब्दहरू छनौट गर्नुहोस् फारम: र त्यसैले, म वास्तवमै उहाँप्रति आभारी छु काम उसले गरेको छ। मैले यहाँ मित्रहरूको दयालु कार्यालयहरूलाई पनि स्वीकार्नु पर्दछ इच्छा अज्ञात रहन को लागी, तिनीहरूको सुझावहरु र प्राविधिक सहयोग को लागी पूरा गर्न को लागी काम.
सब भन्दा गाह्रो काम रिकन्डाइट बिषय व्यक्त गर्न सर्तहरू पाउनु थियो कुरा उपचार मेरो कठिन प्रयास भनेको शब्द र वाक्यांशहरू खोज्नको लागि हो जुन राम्रोसँग अभिव्यक्त गर्दछ अर्थ र केही समावेशी वास्तविकताहरूको विशेषताहरू, र तिनीहरूको अविभाज्य देखाउन सम्बन्ध गर्न होशियार मानव शरीरमा आफूलाई। दोहोरिएको परिवर्तन पछि म अन्ततः यहाँ प्रयोग सर्तहरु मा बसे।
म कसैलाई प्रचार गर्ने छैन; म आफूलाई प्रचारक वा शिक्षक मान्दिन। के यो पुस्तकको लागि जिम्मेवार नभएको भए, मलाई त्यो प्राथमिकता दिनुहोस् व्यक्तित्व यसको लेखकको रूपमा नाम नदिनुहोस्। को महानता विषयहरूको बारेमा जुन मैले जानकारी प्रस्ताव गर्दछु, मलाई आत्म-अहंकारबाट छुटकारा दिन्छ र स्वतन्त्र तुल्याउँछ र भद्रताको बिन्दुलाई निषेध गर्दछ। मसंग विचित्र र चौंकाउने अभिप्रायहरू गर्ने आँट गर्दछु होशियार र अमर आत्मा जुन हरेक मानव शरीरमा हुन्छ; र म स्वीकार गर्दछु कि प्रस्तुत गरिएको जानकारीमा व्यक्तिले के गर्छ वा के गर्दैन भनेर निर्णय गर्दछ।
विचारशील व्यक्तिहरूले मेरो केहि यहाँ बोल्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन् अनुभवहरू भएको अवस्थामा होशियार, र मेरो घटनाहरूको जीवन जसले मसँग कसरी परिचित हुन सक्छ भनेर व्याख्या गर्न मद्दत गर्न सक्छ र वर्तमान विश्वास संग यति भिन्नतामा लेखिएका चीजहरू लेख्न। तिनीहरू भन्छन यो आवश्यक छ किनकि कुनै पनि ग्रंथसूची जोडिएको छैन र यसमा दिइएका बयानहरूलाई प्रमाणित गर्न कुनै सन्दर्भहरू प्रस्ताव गरिएको छैन। मेरो केहि अनुभवहरू मैले सुनेको वा पढेको कुनै कुरा भन्दा फरक छैन। मेरो आफ्नो सोच मानव बारेमा जीवन र हामी बाँचिरहेको संसारले मलाई विषयहरू र घटनाहरू प्रकट गरेको छ जुन मैले पुस्तकहरूमा उल्लेख गरेको पाइन। तर मानौं यो अव्यावहारिक हुनेछ कि त्यस्ता मामिलाहरू हुन सक्छन, तर अरूलाई अज्ञात छ। त्यहाँ कोही छन् जो थाहा छ तर बताउन सक्दैन। म गोपनीयताको कुनै संकल्प अन्तर्गत छैन। म कुनै पनि प्रकारको संगठनको होइन। मैले कुनै ब्रेक गरिन विश्वास मैले के पत्ता लगाएको हो भनेर भन्दै सोच; स्थिर द्वारा सोच जागा रहँदा, भित्र छैन निद्रामा वा ट्रान्समा। म कहिले पनि भएको थिइनँ वा म कहिले पनि कुनै प्रकारको ट्रान्समा रहन चाहन्न।
म के भएको छु होशियार जबकि सोच जस्तै विषयहरु को बारे मा ठाउँ, को एकाइहरु of कुराको संविधान कुरा, बुद्धि, समय, आयाम, सृष्टि र बाह्यकरण of विचारहरू, हुनेछ, म आशा, भविष्य अन्वेषण र शोषणको लागि क्षेत्रहरू खोल्यो। कि द्वारा समय ठिक आचरण मानवको एक भाग हुनुपर्छ जीवन, र विज्ञान र आविष्कारको बराबर राख्नु पर्छ। त्यसो भए सभ्यता जारी रहन सक्छ, र संगै स्वतन्त्रता जिम्मेवारी व्यक्तिगत नियम हुनेछ जीवन र सरकारको।
यहाँ केहि को स्केच छ अनुभवहरू मेरो प्रारम्भिक को जीवन:
ताल मेरो पहिलो थियो महसुस गर्दै यस भौतिक संसारसँगको सम्बन्ध। पछि म शरीर भित्र महसुस गर्न सक्छु, र म आवाज सुन्न सक्छु। मैले बुझें अर्थ आवाजले बनाएको आवाजको; मैले केहि देखिन, तर म, जस्तो महसुस गर्दै, पाउन सक्छ अर्थ द्वारा व्यक्त शब्द-ध्वनि को कुनै लय; अनि मेरो महसुस गर्दै दिए फारम र बस्तुहरूको रंग जुन शब्दले वर्णन गरेको थियो। जब म को भावना प्रयोग गर्न सक्दछु दृष्टि र वस्तुहरू देख्न सक्दछु, मैले फेला पारे फाराम र उपस्थिति जो म, को रूपमा महसुस गर्दै, महसुस गरेको थियो, मैले समातेको के साथ अनुमानित सम्झौता हुन। जब म होश प्रयोग गर्न सक्षम थिए दृष्टि, सुन्नु, स्वाद र गंध र प्रश्नहरूको उत्तर दिन सक्छु, म आफूलाई अनौंठो संसारमा एक अपरिचित हुँ जस्तो लाग्यो। मलाई थाहा थियो म आफू बसेको शरीर होइन तर कसैले मलाई बताउन सकेन कि म को हुँ र कहाँबाट आएको हुँ वा कहाँबाट आएको हुँ र जसलाई मैले सोधपुछ गरे ती मध्ये धेरै जना आफू आफू बसेको शरीर हो भनेर विश्वास गर्थे।
मैले महसुस गरें कि म त्यस्तो शरीरमा छु जहाँबाट म आफैंलाई स्वतन्त्र गर्न सक्दिन। म हराएको थिएँ, एक्लै, र दुखद अवस्थामा उदास। दोहोरिएका घटनाहरू र अनुभवहरू मलाई विश्वास दिलाउनुहोस् कि चीजहरू तिनीहरू जस्तो देखिन्थ्यो जस्तो थिएन; कि त्यहाँ निरन्तर परिवर्तन छ; केहि कुनै स्थायित्व छैन कि; कि मानिसहरूले अक्सर उनीहरूको वास्तवमा भन्नुको विपरित भन्ने गर्थे। बच्चाहरूले "मेक-विश्वास" वा "हामीलाई बहाना गरौं" भन्ने खेल खेले। केटाकेटीहरू खेल्थे, पुरुष र महिलाहरूले विश्वास गर्थे र बहाना गर्थे; तुलनात्मक हिसाबले थोरै मानिसहरू साँच्चिकै सत्यवादी र इमान्दार थिए। मानव प्रयासमा त्यहाँ अपशिष्ट थियो, र प्रदर्शन लामो समय सम्म टिकेन। बाहिरी रूपमा देखा परेको थिएन। मैले आफैलाई सोधें: कसरी चीजहरू बनाइन्छ जुन टिकाउ हुन्छ, र बेकार र गडबडी बिना बनाइन्छ? मेरो अर्को अंशले जवाफ दियो: पहिले, तपाई के चाहानुहुन्छ जान्नुहोस्; हेर्नुहोस् र स्थिर रूपमा समात्नुहोस् मन को फारम जसमा तपाईले चाहानु भएको चीज हुन्छ। तब सोच्नुहोस् र इच्छा र बोल्नुहोस् कि देखा पर्दछ, र तपाइँ के सोच्नुहुन्छ अदृश्यबाट एकत्रित हुनेछन् वातावरण र त्यस वरपर निश्चित गरिएको छ फारम। तब मैले यी शब्दहरूमा सोचेँँ, तर यी शब्दहरूले मैले के देखाउँदछन् सोचे। मैले आत्मविश्वास महसुस गरे कि म त्यो गर्न सक्दछु, र एकैचोटि धेरै प्रयास गरें। म असफल भए। असफल हुँदा मलाई अपमानित, निराश महसुस भयो, र म लज्जित छु।
म घटनाहरूको अवलोकन गर्न सहयोग गर्न सक्दिन। के मैले सुनेको मान्छेहरु के घटनाहरु को बारे मा भन्न को लाग्यो, विशेष गरी को बारे मा मृत्यु, उचित लागेन। मेरा आमाबुबा भक्त मसीहीहरू थिए। मैले यो पढेको सुनें र भने कि "परमेश्वरको”संसार बनायो; कि उसले अमर सृष्टि गर्यो आत्मा संसारमा प्रत्येक मानव शरीर को लागी; र त्यो आत्मा जसले मानेनन परमेश्वरको मा डाली हुनेछ नरक र सदासर्वदाको लागि आगो र गन्धकमा जल्नेछ। मलाई त्यो शब्दले विश्वास भएन। मलाई लाग्न वा यो विश्वास गर्न को लागी यो एकदम ब्यर्थ लाग्यो परमेश्वरको वा हुनु भएकोले संसार बनाउँदछ वा मलाई शरीरको लागि सिर्जना गरेको हुँ जुन म बस्दछु। गन्धकको बोटले मैले आफ्नो औंलाले जलाएको थिएँ र मलाई विश्वास थियो कि शरीर जलाउन सकिन्छ मृत्यु; तर मलाई थाहा थियो कि म, के थियो होशियार म जलेको जस्तै हुन सक्दिन, मर्न सक्दिन, त्यो आगो र गन्धकले मलाई मार्न सक्दैन, यद्यपि दुखाइ त्यो जलाउनु डरलाग्दो थियो। मैले खतरा महसुस गर्न सक्छु, तर मैले सोचेको छैन डर.
मानिसहरूलाई "किन" वा "के," को बारे मा थाहा थिएन जीवन वा बारेमा मृत्यु। मलाई थाहा थियो कि त्यहाँ हुनु पर्छ कारण जे भयो सबैको लागि। म यसका रहस्यहरू जान्न चाहान्छु जीवन र को मृत्यु, र सधैंभरि बाँच्न। मलाई किन थाहा भएन, तर म त्यो चाहदै मद्दत गर्न सक्दिन। मलाई थाहा थियो त्यहाँ रात र दिन हुन सक्दैन र जीवन र मृत्यु, र कुनै पनि विश्व, जब सम्म ज्ञानी व्यक्तिहरू थिएनन् संसार र रात र दिन र जीवन र मृत्यु। यद्यपि मैले यो निश्चय गरें कि मेरो उद्देश्य ती ज्ञानी व्यक्तिहरू भेट्टाउनेछन जसले मलाई बताउनुपर्दछ कि मैले कसरी सिक्नु पर्छ र म के गर्नुपर्दछ, गोप्य रहस्यहरू सुम्पिनु पर्छ। जीवन र मृत्यु। मँ यो कुरा भन्न को लागी सोच्दिन, मेरो दृढ संकल्प, किनकि मानिसहरूले बुझ्दैनन्; तिनीहरूले मलाई मूर्ख वा पागल मान्नेछन्। त्यसबेला म करीव सात वर्षको थिएँ समय.
पन्ध्र वा अधिक बर्ष बित्यो। मैले भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हेरेको थिएँ जीवन केटाहरू र केटीहरूको, जब तिनीहरू हुर्किए र पुरुष र महिलामा परिणत भए विशेष गरी तिनीहरूको किशोरावस्थामा र विशेष गरी मेरो आफ्नै। मेरो विचार परिवर्तन भएको थियो, तर मेरो उद्देश्यThose ज्ञानीहरू, जो जाने, र जसबाट म रहस्यका बारे जान्न सक्दछु जीवन र मृत्युChanwas अपरिवर्तित। म तिनीहरूको अस्तित्वबारे निश्चित थिए; संसार तिनीहरू बिना हुन सक्दैन। घटनाक्रमको क्रममा मैले देख्न सक्दछ कि त्यहाँ सरकार र विश्वको एक व्यवस्थापन हुनुपर्दछ, जसरी त्यहाँ जारी राख्नको लागि कुनै देशको सरकार वा कुनै व्यवसायको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ। एक दिन मेरी आमाले मलाई के विश्वास गर्नुभयो भनेर सोध्नुभयो। कुनै हिचकिचाहट बिना मैले भनें: मलाई थाहा छैन संदेह कि न्याय संसारको शासन गर्दछ, मेरो आफ्नै भए पनि जीवन यो प्रमाणित छैन जस्तो देखिन्छ किनकि मैले स्वाभाविक रूपमा के थाहा पाएँ र म के अधिक गर्न सक्दिन इच्छा.
सोही वर्ष १1892 XNUMX २ को वसन्त Iतुमा मैले एउटा आइतवारको पेपरमा पढें कि एक जना मेडम ब्लाभत्स्की पूर्वेका ज्ञानी पुरूषहरू थिए जसलाई "महात्मा" भनेर चिनिन्थ्यो; कि पृथ्वीमा बारम्बार जीवन, तिनीहरूले हासिल गरेका थिए बुद्धि; कि तिनीहरूले रहस्य को लागी जीवन र मृत्यु, र कि उनीहरूले मेडम ब्लाभत्स्कीको कारण लिएका थिए फारम एक थियोसोफिकल सोसाइटी, जस मार्फत उनीहरूको शिक्षा जनतालाई दिन सकिन्छ। त्यो साँझ त्यहाँ एक व्याख्यान हुनेछ। म गएँ। पछि म सोसाइटीको प्रगाढ सदस्य भएँ। त्यहाँ ज्ञानी पुरुषहरू थिए भन्ने भनाइले तिनीहरूलाई कुनै पनि नामले चिनिन थाल्यो। त्यो केवल मौखिक प्रमाण हो जुन म स्वाभाविक रूपमा मानवको प्रगति र निर्देशन र निर्देशनको लागि आवश्यक पर्ने कुरामा निश्चित थिए प्रकृति। मैले उनीहरूको बारेमा जति सक्दो पढें। I सोचे एक बुद्धिमान मानिस को एक विद्यार्थी बन्ने; तर जारी सोच मलाई वास्तविक मार्ग कसैको लागि औपचारिक अनुप्रयोग द्वारा थिएन, तर म फिट र तयार हुनको लागि नेतृत्व गरायो। मैले देखेको छैन वा यसबाट सुनेको छैन, न त मैले कुनै ज्ञानी व्यक्तिको साथ सम्पर्क गरें, जस्तै मैले गर्भधारण गरें। मेरो कुनै शिक्षक छैन। अब म संग एक राम्रो छ समझ त्यस्ता विषयमा। वास्तविक "समझदार मानिसहरु" मा त्रिएक स्वयम् हुन् Permanence को दायरा। मैले सबै समाजहरूसँगको सम्पर्क बन्द गरें।
सन्‌ १ 1892 XNUMX XNUMX को नोभेम्बरदेखि म अचम्मको र महत्त्वपूर्णबाट पार भयो अनुभवहरूअनुसरण गर्दै, जुन १ 1893 XNUMX of को वसन्त myतुमा, मेरो सबैभन्दा असाधारण घटना भयो जीवन। म न्यु योर्क शहरको New औं एभिन्यूमा १ 14 औं सडक पार गरिसकें। कार र व्यक्ति हतार गर्दै थिए। उत्तरपूर्व कुनामा कर्बस्टोनमा पुग्ने क्रममा, प्रकाश, मेरो टाउकोको बीचमा खोलिएको असंख्य सूर्यहरूको भन्दा बढी। त्यो तत्काल वा मा बिन्दु, अनन्तसम्म पक्राउ गरिएको थियो। त्यहाँ थिएन समय। दूरी र आयाम प्रमाणमा थिएनन्। प्रकृति बाट बनेको थियो एकाइहरु। म थियो होशियार को एकाइहरु of प्रकृति र को एकाइहरु as बुद्धिमत्ता। भित्र र पछाडि, त्यसोभए भन्नुपर्दा, त्यहाँ ठूला र कम प्रकाशहरू थिए; अधिक कम कम लाइटहरु व्यापक, जो को विभिन्न प्रकार को प्रकट एकाइहरु। लाइटहरू थिएनन् प्रकृति; उनीहरु लाईटहरु जस्तै थिए बुद्धिमत्ता, शंकर लाइटहरू। ती उज्यालोपना वा उज्यालोपनाको तुलनामा वरपरको सूर्यको किरण बाक्लो कुहिरो थियो। र भित्र र सबै लाइटहरू मार्फत र एकाइहरु र वस्तुहरू म थिए होशियार को उपस्थिति कुकुर। म सचेत थिए कुकुर परम र पूर्ण रूपमा वास्तविकता, र सचेत सम्बन्ध चीजहरूको। मैले कुनै थ्रिल अनुभव गरेन, भावनाहरूवा एक्स्टसी CONSCIOUSNESS वर्णन गर्न वा वर्णन गर्न शब्दहरू पूर्ण रूपमा असफल हुन्छन्। यो उदात्त भव्यता र शक्ति र अर्डर र को वर्णन प्रयास गर्न बेकार हुनेछ सम्बन्ध in poise के म त्यतिबेला सचेत थियो। अर्को चौध वर्षमा दुई पटक, लामो समयको लागि समय प्रत्येक अवसरमा, म सचेत थिए कुकुर। तर त्यो समयमा समय म पहिलो क्षण मा सचेत थिए भन्दा बढी सचेत थियो।
हुँदा होशियार of कुकुर सम्बन्धित शब्दहरूको सेट हो जुन मैले भनेको मेरो सबैभन्दा शक्तिशाली र उल्लेखनीय पलको बारेमा कुरा गर्न वाक्यांशको रूपमा छान्छु जीवन.
कुकुर सबै मा अवस्थित छ एकाइ। त्यसैले उपस्थिति कुकुर सबै बनाउँछ एकाइ को रूप मा सचेत समारोह यो डिग्रीमा प्रदर्शन गर्दछ जुन यो सचेत छ। सचेत हुनु कुकुर यस्तो चेतना भएकोलाई "अज्ञात" लाई प्रकट गर्दछ। त्यसपछि यो हुनेछ कर्तव्य त्यो एक को के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर बताउन को लागी सचेत हुनु कुकुर.
हुनुमा ठूलो लायक होशियार of कुकुर के यसले कुनै पनि विषयको बारेमा जान्नको लागि सक्षम बनाउँछ, द्वारा सोच. सोच्दै चेतनाको स्थिर पकड हो प्रकाश को विषय मा भित्र सोच। संक्षिप्त रूपमा भनिएको, सोच चार चरणको छ: विषय चयन; चेतना होल्डिंग प्रकाश त्यस विषयमा; ध्यान केन्द्रित गर्दै प्रकाश; र, को ध्यान केन्द्रित प्रकाश। जब प्रकाश ध्यान केन्द्रित छ, विषय ज्ञात छ। यस विधिद्वारा, सोच्दै र भाग्य लेखिएको छ।
विशेष उद्देश्य यस पुस्तक को हो: बताउन होशियार मानव शरीरमा आफूलाई हामी अतुलनीय छौं कि doer होशपूर्वक अमर को अंश व्यक्तिगत ट्रिनिटीहरू, त्रिएकमा आफूलाई, जो, भित्र र बाहिरका समय, हाम्रो महान संग बस्नुभयो विचारक र ज्ञातकर्ता मा पूर्ण यौनहित शरीरमा भागहरू Permanence को दायरा; कि हामी, मानव शरीरमा सचेत स्वयं, एक महत्त्वपूर्ण परीक्षा मा असफल, र यसैले आफूलाई त्यहाँबाट निर्वासित Permanence को दायरा यस अस्थायी पुरुष र महिलाको जन्मको महिला र मृत्यु र पुनः अस्तित्व; कि हामीसँग छैन स्मृति यसको कारण हामी आफैंलाई एक आत्म सम्मोहन मा राख्छौं निद्रामा, गर्न सपना; त्यो हामी जारी राख्नेछौं सपना मार्फत जीवन, मार्फत मृत्यु र फेरि फिर्ता गर्न जीवन; हामीले यो गरिरहनुपर्दछ जबसम्म हामी डी-सम्मोहित, उठ्ने, आफैलाई बाहिरबाट बाहिर आउँदैनौं सम्मोहन जसमा हामीले आफूलाई राख्यौं; तर, यो लामो समय लिन्छ, हामी हाम्रो देखि जागा हुनुपर्छ सपना, सचेत बन्नुहोस् of आफैले as हामी हाम्रो शरीरमा छौं, र त्यसपछि पुन: उत्पन्न र हाम्रो शरीरहरू अनन्तसम्म पुनर्स्थापित गर्दछौं जीवन हाम्रो घरमा — Permanence को दायरा जहाँबाट हामी आएका छौं - जुन यस संसारमा व्याप्त छ, तर मृत्युको आँखाले देख्न सक्दैन। त्यसोभए हामी होशियारीले हाम्रा ठाउँहरू लिनेछौं र हाम्रा भागहरू अनन्त क्रमको प्रगतिमा जारी राख्नेछौं। यसलाई पूरा गर्ने तरिका अध्यायहरूमा देखाइएको छ जुन पछि हुन्छ।
यसमा यो पाण्डुलिपि लेख्न काम प्रिन्टर संग छ। त्यहाँ थोरै छ समय के लेखिएको छ थप्न। यसको तयारीको धेरै वर्षहरूमा यो प्रायः सोधिन्छ कि मैले बाइबलमा बाइबलका अंशहरूको केही व्याख्याहरू समावेश गरेको छु जुन बुझ्न नसकिने देखिन्छ, तर कुनमा प्रकाश यी पृष्ठहरूमा के भनिएको छ, बुझ्नुहोस् र गर्नुहोस् अर्थ, र जुन एकै साथ समय, यसमा बनेका कथित बयानहरू काम। तर म तुलना गर्न वा पत्राचार देखाउन घृणा गर्छु। मलाई यो चाहिएको थियो काम केवल यसको आफ्नै गुणमा न्याय गर्न।
बितेको वर्षमा मैले "बाइबलको हराएको पुस्तकहरू र ईडनको बिर्सिएका पुस्तकहरू" युक्त एउटा खण्ड खरीद गरें। यी पुस्तकहरूका पृष्ठहरू स्क्यान गर्दा, यो अचम्मको कुरा हो कि कतिजना अनौठो र अन्यथा बुझ्न नसक्ने परिच्छेदहरू बुझ्न सकिन्छ जब एक व्यक्तिले यसको बारेमा यसमा के लेखिएको छ भनेर बुझ्छ। ट्र्युन स्व यसको तीन भागहरू; को बारेमा पुनर्जनन एक सिद्ध, अमर भौतिक शरीर, र मा मानव शारीरिक शरीर को Permanence को दायरा, - जसको शब्दमा येशू "राज्य" हो परमेश्वरको। "
फेरि बाइबल अंशहरूको स्पष्टीकरणको लागि अनुरोधहरू गरिएको छ। हुनसक्छ यो राम्रोसँग भयो र यो पनि पाठकहरूले सोच्दै र भाग्य यस पुस्तकका केही कथनहरूलाई प्रमाणित गर्न केही प्रमाण दिइन्छ, जुन प्रमाणहरू नयाँ करारमा र माथि उल्लेखित पुस्तकहरू दुवैमा पाउन सकिन्छ। त्यसैले म अध्याय X मा पाँचौं खण्ड जोड्ने छु, "भगवान र तिनीहरू धर्म, ”यी मामिलाहरूमा व्यवहार गर्दै।
प्रतिलिपि अधिकार 1974 द्वारा The Word Foundation, Inc.